Lords Mobile အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2021 - အခမဲ့ - 9Apps
ဒေါင်းလုပ် APK（784.1MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် Lords Mobile: Tower Defense
True em ကရာဇ်ကျဆုံးသွားပြီ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်စစ်မှန်သောသူရဲကောင်းတစ် ဦး လိုအပ်ပြီးစစ်မှန်သောယေဟောဝါသည်, Dwarves နှင့် MermaAids မှ Dwarves နှင့် MermaAids မှ Dwarves ALVEADS နှင့် Steampunk စက်ရုပ်များထံမှသူရဲကောင်းများစုဆောင်းခြင်းနှင့်ဤမှော်ကမ္ဘာတွင်သင်၏စစ်တပ်ကိုစုစည်းပြီးသင့်စစ်တပ်ကိုစုစည်းရန်, သင်၏အင်ပါယာကိုတည်ဆောက်ရန်ရန်ပွဲနှင့်အောင်နိုင်!
▶▶ vergeway ကိုရိုက်ထည့်ပါ။ ◀◀
မျှော်စင်ကာကွယ်ရေးလော။ ထိုအခါသင် vergeway ကိုချစ်ပါလိမ့်မယ်! ကဒ်ပြားများကိုစုဆောင်း။ အဆင့်မြှင့် တင်. ၎င်းတို့ကိုမတူညီသောအဆင့်များနှင့်ဖြေရှင်းရန်၎င်းတို့ကိုရောနှောပါ။ Chrge အတွင်း၌ပုန်းအောင်းနေသောမကောင်းသောရန်သူများကိုအနိုင်ယူရန်သင့် ဦး နှောက်ကိုစမ်းသပ်ပါ။
▶▶သင်၏ကိုယ်ပိုင်နိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ပါ အဆောက်အ ဦး များ, သုတေသနပြုခြင်း, သင်၏တပ်များကိုလေ့ကျင့်, သင်၏သူရဲကောင်းများကိုအဆင့်မြင့်လှည့ ်. သင်၏နိုင်ငံကိုကောင်းစွာတိုးတက်အောင်လုပ်ပါ။
တပ်များပုံစံများကိုအသုံးချရန် Troop အမျိုးအစားများနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောတပ်များပုံစံ6ခုနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောတပ်များဖွဲ့စည်းခြင်း ! သင်၏ lineup များကိုစီစဉ်ပါ, ကောင်တာစနစ်၏အားသာချက်ကိုယူပြီးသင်၏တပ်များကိုမှန်ကန်သောသူရဲကောင်းများနှင့်တွဲဖက်ပါ။ သင်၏ရန်သူများကိုအနိုင်ယူရန်သင်၏နည်းဗျူဟာကိုစုံလင်သည်။
RPG-style Campaign မှတဆင့်တိုက်ခိုက်ရန်သူရဲကောင်း5ယောက်ကိုဖန်တီးပါ။ သင်၏နိုင်ငံကိုစစ်ဗိုလ်ချုပ်များအနေဖြင့်ဝါကြွားစေပါ။
သင်၏မဟာမိတ်များနှင့်အတူတိုက်ခိုက်ရန် Guild Guild ပါ။ ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်တိုက်ပွဲများ, စစ်ပွဲများ, အံ့သြဖွယ်ရာစစ်ပွဲများ, အံ့အားသင့်ဖွယ်ရာစစ်ပွဲများ, အံ့သြဖွယ်ရာစစ်ပွဲများ, ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးမှသန်းနှင့်ချီသောကစားသမားများနှင့်အတူရပ်နေသူများကိုအနိုင်ယူပါ။ ပလ္လင်တော်ကိုအုပ်စိုး။ စည်းစိမ်ဥစ္စာရှိသမျှကိုအုပ်စိုးလော့။
▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶bစဉ်များကသင်၏စစ်တပ်များသည်လှပသော 3D ဂရပ်ဖစ်တွင်တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ သင်၏သူရဲကောင်းများသည်သူတို့၏ကျွမ်းကျင်မှုများကိုဖော်ထုတ်ပြီးသူတို့၏ဆန်းကြယ်မှုစွမ်းအားကိုအသုံးချသကဲ့သို့စောင့်ကြည့်ပါ။
=== REAMPORT ===
Instposs.com/hwww.ouploc: https://www.faceboupe.com /Url?q=https://www.instagramgram.com/lordsmobile/&sa=d&sntz=1&usg=fqjcntz=1&usg=fqjcnofg0XA :
: ///www.google.com/url? q = https: //discord.com/lordsmite/lordsmobile&sa=d&sntz=1&usg=fque3e6tpsmz3zthtz3z'-w "Target =" _BLAND.com/invite/Lordsmobile
မှတ်ချက် - ဤဂိမ်းသည်ကစားရန်အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုလိုအပ်သည်။
ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှု - [email protected]
devices (OS 5.1.1) သို့မဟုတ်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဂိမ်းအချက်အလက်များကို Exte မှသိမ်းဆည်းရန်အောက်ပါတို့ကို enable လုပ်နိုင်သည် rnal သိုလှောင်မှု။
ဘာအသစ်လဲ Lords Mobile: Tower Defense 2.68
HI.MG. HARR SAN
KO THU THIN TWELL
I love this game😊😊😊